Ebighị bụ ihe kasị mkpa usoro-rụrụ tupu ị malite iji gị iPhone. Ọtụtụ n'ime oge, ebighị usoro na-arụ ọrụ were were, ma ihe ọ bụrụ na ị na-abịa gafee ụfọdụ njehie mgbe ebighị? N'ọnọdụ ka ukwuu, iTunes egosi njehie ozi-atụ aro na ebighị-apụghị rụrụ.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ, njehie a, jide n'aka na ngwaọrụ gị nwere ọhụrụ OS mmelite arụnyere tinyere na-arụ ọrụ na kaadị SIM. Ọ bụrụ na ndị na-echegbu handset na-ekpochi na akpan akpan netwọk, jide n'aka na ị na-eji SIM si otu netwọk.
Cheta, ebighị si na ekwentị mkpanaaka gị netwọk dị mkpa ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị na-eji gị iPhone ka ekwentị kama iji ya dị ka iPod on wireless netwọk. Ya mere, ọ bụrụ na ndị dị mfe ebighị usoro ada, ọ bụ ihe amamihe na ozugbo kpọtụrụ ekwentị gị netwọk na-nke ota.
Rụọ ọrụ iPhone na-eji dị Wi-Fi ngwaọrụ
E nwere ụzọ abụọ iji rụọ ọrụ iPhone. Ịnwere ike ịgbalite ya na-arụsi ọrụ SIM kaadị, ma ọ bụ na-enweghị SIM kaadị site na njikọ ya na gị PC na nwere iTunes.
Ee, ị na-adịghị mkpa SIM kaadị iji gị iPhone na ya ngwa. Ị nwere ike iji gị iPhone dị ka iPod nanị site na njikọ ya na ikuku na netwọk.
E nwere ihe abụọ na ụdị iPhones ke ahịa, CDMA na GSM. Ụfọdụ CDMA handsets nwekwara SIM kaadị oghere, ma na-kenyere nanị na-arụ ọrụ na kpọmkwem CDMA netwọk.
Echegbula; ị nwere ike mfe Ị kpọghee ekwt ma ụdị nke iPhones mere na i nwere ike iji ha dị ka wireless ngwaọrụ.
Rụọ ọrụ gị iPhone na iTunes
Na usoro a, ị ga-achọ na-arụsi ọrụ SIM etinyere na SIM oghere n'oge ebighị usoro.
Jikọọ nchegbu ngwaọrụ na kọmputa na nwere iTunes arụnyere na ya. Mepụta a azụ-elu, ihichapu niile ọdịnaya na tọgharịa ngwaọrụ. Mgbe ahụ, ịkwụpụ ngwaọrụ site na PC gị, ịgbanwee na anya, na reconnect ka PC na iji eriri. Họrọ nhọrọ iji rụọ ọrụ gị iPhone. Usoro ga-akpali gị ịbanye gị Apple ID na paswọọdụ.
Soro ntuziaka nke ebighị. Ozugbo ị na-eme na set-elu, wepụ kaadị SIM. Na ọ bụ; i nwere ike na-amalite iji gị iPhone on wireless mode.
Rụọ ọrụ gị iPhone enweghị SIM kaadị na-enweghị ejikọta iTunes
Ee, ị nwekwara ike rụọ gị iPhone enweghị na-eji SIM na-enweghị njikọ ya na iTunes.
Mbụ, wepụ kaadị SIM si nchegbu ekwentị, na mgbe ahụ ka ọ na. Ihuenyo ga-apụta na-atụ aro na ekwentị bụ enweghị ike iru ebighị nkesa. Pịa n'ụlọ button, na họrọ mberede oku nhọrọ. Ịkpọ oku 112, ma pịa igodo oku. Mgbe na ịpị igodo oku, ozugbo pịa ike bọtịnụ.
Na-esote ihuenyo, ị ga-ahụ abụọ nhọrọ, akpa onye ga-akpali gị slide, na abụọ nhọrọ ga-abụ "kagbuo." Press ịkagbu, na na-esote ihuenyo, mgbata na elu akụkụ nke ihuenyo ka ịlaghachi na mberede akpọ ihuenyo, na mfe pịa oku igodo ngwụcha. Nke ahụ bụ ya! Ekwentị gị ga-arụ ọrụ ma ị nwere ike jikọọ na Wi-Fi iji niile ngwa site na ngwaọrụ, dị nnọọ ka ihe iPod.
Enwere m ike rụọ ọrụ m ochie iPhone dị ka 3GS?
The Usoro iji rụọ ọrụ okenye iPhones bụ fọrọ nke nta yiri. Ndị kasị atụ aro usoro bụ jikọọ na ngwaọrụ PC na nwere iTunes arụnyere na ya.
Mbụ, fanye ide (ghara ịrụ ọrụ) SIM na kaadị SIM oghere, jikọọ na ngwaọrụ iTunes, na n'ime sekọnd ole na ole, ekwentị gị ga-unlocked si ebighị ihuenyo.
Cheta, Apple bụ nnọọ merela agadi mgbe ọ na-abịa ịchọputa furu efu ma ọ bụ zuru iPhones. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-ahụ iPhone, ma ọ bụ iPod aka ebe, mgbe na-eche banyere iji ha. Ị nwere ike ina jidere na-eme.
> Resource> iPhone> Esi rụọ ọrụ iPhone 6 Plus / 6 / 5s / 5